Ndakatenga Drone Nyowani yeVatengi ... uye Zvinoshamisa | Martech Zone
Ndakatenga Drone Nyowani yeVatengi… uye Zvinoshamisa
China, January 9, 2020 China, January 9, 2020 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura, ini ndanga ndichiyambira mukuru wedenga kontrakta pane yavo yepamhepo kuvapo. Isu takavaka patsva uye tikagadziridza saiti yavo, tikatanga chirongwa chichienderera mberi chodonhedza kutora ongororo, tikatanga kutsikisa mapurojekiti avo online. Chinhu chimwe chete chaive chisipo, hazvo, chaive pamberi uye shure kwemifananidzo yezvivakwa.
Nechekupinda kune yavo quote uye chirongwa manejimendi manejimendi, ini ndakakwanisa kuona izvo zvivakwa zvaivhara uye kana mapurojekiti apera. Mushure mekuverenga toni yemaonero online, ndakatenga DJI Mavic Pro drone.
Nepo iyo drone yakatora mifananidzo inoshamisa uye yaive nyore kubhururuka, zvaive zvakanyanya kurwadziwa kunyatso kumisikidza uye kushanda. Ini ndaifanirwa kupinda mukati kuDII ndakafunga iPhone application, kubatanidza foni kune mutongi, uye zvakatoipa… kupinda pane imwe nendege imwe chete. Dai ndaive munzvimbo isina kubvumidzwa, iniwo ndaifanira kunyoresa ndege yangu. Ini ndaishandisa iyo drone kwemakumi gumi nemaviri kana zvakadaro mapurojekiti uye ndokuzoitengesa kumutengi kana ini ndapedza chibvumirano navo. Iyo yakanaka drone, ivo vachiri kuishandisa nhasi. Izvo zvainge zvisiri nyore kushandisa uye ini ndaive ndisina mumwe mutengi pazvinonzwisisika.
Nekukurumidza kumberi gore uye yangu Midwest Data Center yanga ichivhura nyowani, mamiriro-e-iyo-e-art data centre muFort Wayne, Indiana iyo yaisanganisira EMP nhoo. Yakanga iri nguva yekuti ini nditore mamwe madrone shots, saka ndakawana kubata kwevamwe vatori vemifananidzo nevateereri vemavhidhiyo mudunhu iri.
Iwo makotesheni andakatambira ebasa aive anodhura… akaderera ari $ 3,000 kutora vhidhiyo nemifananidzo yenzvimbo nhatu dzekambani. Tichifunga nezve nguva yekutyaira uye kutsamira kwemamiriro ekunze, izvo zvaisave zvemuchadenga… asi ini ndanga ndisingade kupinza iyo mhando yemubhadharo.
Ndakabuda ndikaverenga dzimwe wongororo pamhepo ndikaona kuti mutambi mutsva pamusika aive achikwira mukuzivikanwa, iyo Autel Robotics EVO. Ine skrini yakavakirwa-mukati pane mutongi uye hapana chikonzero chekupinda, ini ndinogona kungotora drone kunze, kuibhururuka, uye kutora mavhidhiyo nemifananidzo yandaida. Iyo ine siringi iyo yakawanda kwazvo zvakakwana saka hapana FAA kunyoreswa kana rezinesi inodiwa kuti ibhururuke. Hapana setup, hapana tambo dzinobatanidza… ingoibatidza wobva wabhururutsa. Zvinotyisa… uye zvaitodhura kupfuura iyo Mavic Pro.
Chigadzirwa chigadzirwa che drone:
Yakashongedzerwa kumberi EVO inopa kamera ine simba pane 3-axis inogadzikisa gimbal iyo inorekodha vhidhiyo pa4k resolution kusvika makumi matanhatu mafuremu pasekondi uye yekurekodha inomhanyisa kusvika 60mbps mune H.100 kana H.264 codec.
Uchishandisa chaiwo-girazi optics EVO inotora mapikicha anokatyamadza pa12 megapixels ine yakakura simba renji kune rumwe ruzivo uye ruvara.
Yakabatanidzwa epamberi emakomputa ekuona masystem anopa kumberi chipingamupinyi kunzvenga, kumashure kwezvipingamupinyi kuona uye ezasi sensors kwekunyatso kumhara kumhara uye yakagadzikana indoor ndege.
EVO inozvirumbidza nguva dzekubhururuka kusvika pamaminitsi makumi matatu nehurefu hwe30 mamaira (4.3KM). Pamusoro pezvo, EVO inopa zvinokundikana kukuzivisa iwe kana bhatiri radzikira uye inguva yekudzokera kumba.
EVO inosanganisira iri kure controller iyo inogara 3.3-inch OLED skrini ichikupa iwe yakakosha ruzivo rwekubhururuka kana inorarama 720p HD vhidhiyo feed inoita kuti iwe uone iyo kamera kuona pasina kudikanwa kwefoni mbozha.
Dhawunirodha yemahara Autel Explorer app inowanika yeApple iOS kana Android zvishandiso uye batanidza kune iri kure controller uye uwane mukana kune mamwe epamberi magadziriso uye kuzvimiririra nendege maficha seDynamic Track, Viewpoint, Orbit, VR munhu wekutanga kuona uye Waypoint kuronga kuronga.
Iyo Evo ine Micro SD slot yekumisikidza nyore mafaira.
Ini ndakatenga mamwe mabhatiri uye kadhi nyoro yekutakura drone. Inopeta zvine mutsindo uye iri nyore kutakura.
Tenga iyo Autel Robotic EVO Drone Bundle
Isu takabata imba yakavhurika padata nyowani yedata uye ini ndakatora drone kumusoro, ndikatora mifananidzo nemavhidhiyo, uye vakabuda vakanaka. Vepepanhau vemunharaunda vaivepo uye ndakakwanisa kuvatumira mavhidhiyo ayo avakazoshandisa munhau yavo yenhau. Kwapera masvondo mashoma, imwe nhau yakaratidza kubvunzurudza varidzi uye ikasanganisira vhidhiyo zvakare. Uye, ndakagadzirisa webhusaiti yavo, kusanganisira mifananidzo nemavhidhiyo mukati mayo. Heano mifananidzo:
Lifeline Dhata Centres Drone Shots
Yaive yakanakisa madhora chiuru andakamboshandisa… ndave kutowana kudzoka kunoshamisa mukudyara uye mutengi anofara kwazvo. Zvakanakisa pane zvese, zvaisada chero hunyanzvi kuti ushande zvachose… ingoverenga iwo mirairo uye urikutora pfuti dzakakwana mukati memaminitsi. Ini ndakatoiburitsa ndokuyedza kuibhururutsa kunze kwehure ... uye yakadzoka mukati memaminitsi. Imwe nguva, ndakaibhururutsira mumuti ndikakwanisa kuizunza. Uyezve, imwe nguva, ndakaibhururutsira mukati merimwe imba ... uye zvinoshamisa kuti haina kukuvara chero. (Wee!)
Padivi katsamba: Autel yazivisa yazvino vhezheni yeiyi drone, iyo Autel Robotic EVO II… asi handisati ndazviona paAmazon.
kuburitsa: Ndiri kushandisa makodhi angu ehukama kune vese DJI neAmazon mukati meichi chinyorwa.
Tags: atariautel marobhoti EVOautel marobhoti EVO 2DJIDJI Mavicdrone the manoDrone mapikicha
Maitiro Ekugonesa uye Kugadziridza WordPress yeMapikicha Mifananidzo
Acquia: Chii chinonzi Mutengi Dhata Platform?